Ivukile Gospel Festival ihoxisiwe ngenxa yeCorona
NOKUBONGWA PHENYANE | March 19, 2020
IGCIWANE iCoronavirus liphoqe ukuthi ume umcimbi omkhulu walo nyaka ojwayele ukuba ngempelasonto yePhasika, Uvukile Gospel Festival.
Lo mcimbi ogubha iminyaka eyisishiyagalolunye, waba khona, ubuzoba ngo-Ephreli 12, ePort Shepstone, enkundleni Ugu Sports and Leisure.
Izolo abahlela lo mcimbi baveze ukuthi bebengeke bawuzibe umyalelo kaMengameli Cyril Ramaphosa, wokumisa imicimbi eba nabantu abangaphezulu kuka-100.
“Lona ngomunye wemicimbi ehanjelwa ngabantu abangaphezu kuka-100.
“Ngakho siyawuhlonipha kakhulu umyalelo okhishwe wumengameli, ngalo mcimbi sisuke silwa nezinto ezahlukene ezenzeka emphakathini, nezempilo-ke zihamba phambili kuthina njengabahleli balo mcimbi,” kusho uPastor Mjosty ongomunye wabahleli balo mcimbi.
U-Irvin Sihlophe naye ongomunye wabahlela umcimbi uveze ukuthi bayabonga kakhulu kusuka kubaculi nabo bonke abantu akade besebenzisana nabo ukuhlela lo mcimbi wathi bayathemba ukuthi ngeke babalahle uma sebeqhubeka nawo.
“Siyacela ukuthi bonke abathintekayo bahloniphe isimo esisabhekene naso. Siyanxusa abaholi bamabandla bakhulekele lesi simo esibhekene naso ikakhulukazi amaciko njengoba imicimbi eyisa ibhodwe eziko imiswa yonke,” kuchaza * -Irvin.
Baveze ukuthi bonke abathenge amathikithi bangaqhubeka bawagcine kuze kube bamemezela olunye usuku olunye lo mcimbi.
Khonamanjalo umcimbi obe nesasasa kuvela ukuthi kuza kuwo umculo waphesheya kwezilwandle uCardi B, iCastle Lite Unlocks, nawo sekuvele ukuthi uhlehlisiwe.
Abahlela lo mcimbi baveze ukuthi basezingxoxweni nalo mculi wase-USA ngokuza kuleli, usuku olusha bazolumemezela maduzane.
Akuyona kuphela le micimbi emisiwe kodwa nobuzoba owokuqala wenziwa yiPlatinum Lounge yaseGoli, i-All White Party ebizoba seVirginia Airport eThekwini ngo-Ephreli 12 uhlehlisiwe ngenxa yeCorona.
UThabani Nyide, wePlatinum Lounge, uthe bawuhlehlisile lo mcimbi bazomemezela usuku lwawo emuva kokudlula kwezivuvaba zobhubhane. Uthe abathenge amathikithi basazokwazi ukungena ngawo uma usubuya lo mcimbi.
“Abafuna ukubuyiselwa imali bangangithinta ukuze kwenziwe izinhlelo zokuthi bayithole.”